अमेरिकाको न्युयोर्कमा भन्दा चीनको बेइजिङमा पहिलो पटक धेरै अर्बपति ! - Dainik Online Dainik Online
अमेरिकाको न्युयोर्कमा भन्दा चीनको बेइजिङमा पहिलो पटक धेरै अर्बपति !
प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७७, बिहिबार ११ : ३४
काठमाडौं । चीनको बेइजिङ विश्वकै सबैभन्दा धेरै अर्बपति हुने सहर बनेको छ । फोर्ब्सले निकालेको विश्वका धनी व्यक्तिहरुको सूचीअनुसार चीनको राजधानी बेइजिङमा सबैभन्दा धेरै अर्बपति देखिएका हुन् । बेइजिङमा पछिल्लो वर्ष मात्रै ३३ जना अर्बपति थपिएका छन् ।
योसँगै बेइजिङमा अर्बपतिको संख्या १०० पुगेको छ । विगत ७ वर्षदेखि अर्बपतिको संख्याको हिसाबले शीर्ष स्थानमा रहेको न्युयोर्कलाई बेइजिङले यस वर्ष उछिनेको हो । न्युयोर्कमा ९९ जना अर्बपति रहेको फोर्ब्सको सूचीमा देखिएको छ ।
कोरोना महामारीका बीच प्रविधि र स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यापारले बेइजिङमा अर्बपतिको संख्या थएिको बीबीसीले जनाएको छ ।
अर्बपतिको संख्या धेरै भए पनि न्युयोर्कमा रहेका अर्बपतिको कुल सम्पत्ति भने बेइजिङका अर्बपतिको भन्दा ८० बिलियन अमेरिकी डलर बढी रहेको पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
बेइजिङका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् भिडियो सेयरिङ एप टिकटकका संस्थापक तथा यसको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सका सीईओ चाङ यिमिङ । उनको कुल सम्पत्ति ३५.६ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
त्यस्तै न्युयोर्कका सबैभन्दा धनी व्यक्ति पूर्वमेयर समेत रहेका माइकल ब्लूमबर्गको कुल सम्पत्ति भने ५९ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
अमेरिकामा जस्तै चीनमा पनि पछिल्लो समय ई–कमर्समा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुले राम्रो कमाएका छन् । यस वर्षमात्रै चीनको बेइजिङसहित हङकङ र मकाउमा समेत गरी २ सय १० जना अर्बपति थपिएको फोर्ब्सले जनाएको छ ।
चीनका अर्बपतिमध्ये आधाले प्रविधि व्यवसाय र उत्पादन क्षेत्रबाट पैसा कमाएका छन् । यसपटक अर्बपतिको सूचीमा ई–सिगरेट उत्पादन गर्ने केट वाङ पनि परेकी छिन् ।
फोर्ब्सको सूचीअनुसार यो वर्षको विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति अमेजन ग्रुपका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेफ बेजोस बनेका छन् । उनको कुल सम्पत्ति १८८.५ बिलियन अमेरिकी डलर छ ।
गत वर्ष पनि एक नम्बरमै रहेका उनको सम्पत्ति १४६.९ बिलियन थियो ।
उक्त सूचीमा एलन मस्क दोस्रो स्थानमा छन् । टेस्ला कम्पनीका प्रमुख उनको सम्पत्ति १५१ बिलियन अमेरिकी डलर छ । गत वर्ष उनी २१ नम्बरमा थिए । त्यतिबेला उनको सम्पत्ति ३५.६ बिलियन थियो ।
यस्तै, तेस्रो स्थानमा फ्रान्सको फेसन कम्पनीका प्रमुख बनार्ड अर्लन्ट परेका छन् । यो वर्ष उनको सम्पत्ति १५० बिलियन अमेरिकी डलर छ । गत वर्ष उनी ९४.१ बिलियन अमेरिकी डलर सम्पत्तिसहित तेस्रो स्थानमै थिए ।
गत वर्ष दोस्रो स्थानमा रहेका बिल गेट्स यो वर्ष चौथो स्थानमा परेका छन् । यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति १२४ विलियन अमेरिकी डलर छ ।
अमेरिकामा माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक उनको सम्पत्ति गत वर्ष १०६.५ बिलियन अमेरिकी डलर थियो ।
फेसबुक कम्पनीका मालिक मार्क जुगरबर्ग यो वर्ष धनीहरूको सूचीमा पाँचौं नम्बरमा छन् । यो वर्ष उनको कुल सम्पत्ति ९७ बिलियन अमेरिकी डलर छ । गत वर्ष उनी ८६.५ विलियम अमेरिकी डलर सम्पत्तिसहित चौथो नम्बरमा थिए ।